कोरोनाको 'व्यक गियर' पहिलोभन्दा धेरै गुणा डलरग्दो - Aarthiknews
कोरोनाको 'व्यक गियर' पहिलोभन्दा धेरै गुणा डलरग्दो
एजेन्सी । कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारबाट निको भएपछि उनीहरुमा पुन संक्रमित भएको घटना धेरै देशमा देखिन थालेको छ । पहिलो पटक कोरोना देखिएको चीनमा पुन शुक्रबार १२ सयभन्दा बढीको मृत्यु भयो र त्यहा पुन नयाँ रोगीहरु पनि देखा प‍र्न थालेका छन् । दक्षिण कोरियामा पनि पुनः त्यस्ता संक्रमितको सख्या वृद्धि भइरहेका छन् । भारतमा पनि आएको छन । नेपालमा पनि पहिलो विरामी वा अन्य ठिक भएका विरामीको निगरानी गर्न पर्ने यी घटनाले जरुरी भएको देखायो ।
कोरोनाको भाइरस किन पुन व्यक हुँदै छ ? यो कोरोनाको यो दोस्रो आक्रमण पहिलो आक्रमण भन्दा बढी खतरनाक हुन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन । डाक्टरहरुले भन्न थालेका छन समस्या अझै सकिएको छैन र सजिलै सकिने वाला पनि छैन भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । र यो दोस्रो समस्या कोरोना सम्बन्धित ट्रेलर देखाउन शुरू भयो । अहिलेसम्म हामी कोरोनासँग सहज व्यवहार गर्दै थियौं। तर, अब हामी पनि कोरोनाको डबल आक्रमणको लागि अर्को तयारीमा जुट्नु पर्छभन्ने देखाएको छ ।
किनभने विश्वका अन्य देशहरूसँगसँगै कोरोना पार्ट २ ले छिमेकी देश भारतलाई आक्रमण गरेको छ । यसको परिणामहरू कत्ति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगायन पनि सकिदैन । ठूलो जनसंख्या र कम मेडिकल सुविधाहरूको कारण, हामीलाई कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार गर्न गाह्रो भइरहेको छ । कोरोनाबाट निको पारिएका बिरामीहरू फेरि बिरामी पर्न थाले भने के हुन्छ ?
विशेषज्ञ र कोरोना भाग २ का बिरामीहरूका अनुसार यो पहिलेको कोरोनाभन्दा धेरै गुणा बढी खतरनाक हुने गरेको छ । किनभने कोरोना बिरामीको लक्षण कोरोना भाग २ बिरामीहरूमा भेटिएनन । तिनीहरूलाई न त ज्वरो आउछ । तिनीहरू न त खोक्ने र न अन्य कुनै दुखाउने नै हुन्छ । यस्ता बिरामीहरूलाई चिन्न धेरै गाह्रो हुन्छ । रोगीले मात्र अनुमान गर्न सक्छ तब उनले फेरि जाँच गर्छ वा भाइरसको अन्तिम चरणमा पुग्छ । जब सास फेर्न नै गाह्रो हुन थालिसकेको हुन्छ ।
भारतको दिल्लीको छेउछाउ नोएडाका दुई विरामीमा कोरोना संक्रमितबाट निको भएपछि पुन भाइरसबाट संक्रमित भए । दुबै बिरामीलाई कोरोना भाइरसबाट निको भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो । तर, त्यो भन्दा पहिले तेस्रो जाँचको लागि नमूना दिएका थिए । उक्त परिक्षणमा कुनै समस्या छैन भनेपछि बिरामीलाई १४ दिनसम्म घर भित्रै बस्ने सल्लाह दिइएको थियो ।
तर जब यो तेस्रो परिक्षणको रिपोर्ट नोएडाबाट आयो, त्यहाँ एउटा हलचल मच्चिएको छ । कोरोना पोजिटिभको सँगै उपचारपछि भाइरस दुबै बिरामीको शरीरमा फर्कियो जुन नेगेटिभ रिर्पोट आयो । यद्यपि यो आश्चर्यजनक कुरा हो कि पोजेटिभ रिर्पोट बाहिर आएपछि यी बिरामीहरूलाई कोरोना संक्रमणको कुनै लक्षण हुँदैन ।
डाक्टर र वैज्ञानिकहरूले कोरोनाका कारण यी बिरामीहरूलाई दुई पटक आक्रमणमा परे । दुई पटक परीक्षणमा नकारात्मक आइसकेपछि पुन सकारात्मक हुने भनेको भाइरस फेरि शरिरमा कोरोना भाइरस सक्रिय हुनु हो । यो कसरी भयो किन यो भयो भनेर डाक्टर नै आश्र्चयमा परेका छन ।
दक्षिण कोरियाको अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि दोस्रो पटक कोरोना भाइरसका बिरामीहरू पुन अस्पतालमा आइरहेका छन् । हालसम्म १०० भन्दा बढी त्यस्ता घटनाहरू कोरियामा पनि आइसकेका छन्। जसमा पहिला पूर्ण रुपमा बिरामीबाट ठिक भएर घर फर्केकाहरुमा पुन कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ ।
दक्षिण कोरियाका सरकार र चिकित्सकहरू पनि कोरोनाको यो पुनरागमनबाट र्हरान भएका छन् । किनभने त्यहाँ लगभग ८ हजार व्यक्ति छन् जो कोरोनाबाट निको भएपछि घर जान अनुमति पाइसकेका छन । यदि कोरोना भाइरस पुन यी व्यक्तिहरुमा संक्रमण भयो भने स्थिति कति डरलाग्दो हुनसक्ला अनुमान पनि लगाउन सकिदैन ।
चीनमा पनि डेढ हजार भन्दा बढी त्यस्ता घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ जसमा कोविड १९ बाट निको भएपछि पनि विरामीको शरीरमा रिभर्स गियर लियो । धेरै जसो केसहरू चीनको हुबेई प्रान्तको लकडाउन पछि आए र विशेष गरी वुहानमा उही समयमा कोरोना ब्याक फायरका बिरामीहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू पनि कोरोना पोजिटिभ रहेको पाइएको छ ।
यो कोरोना रिटर्न्सको कथा पक्कै पनि डरलाग्दो हुनसक्छ । किनकि कोरोनाका लक्षणहरू हामी सबैलाई थाहा छ । यसै आधारमा, विश्व यसको उद्धारको लागि व्यवस्था गर्दै गरिदै आएको छ । चिसो, खोकी, घाँटी दुखाई, ज्वरो, सास फेर्न गाह्रो यी कोरोनाका लक्षणहरू थिए । तर, यो नयाँ अनुहारमा फर्केका कोरोनाले फेरि एकपल्ट विश्वलाई समस्यामा पार्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । किनभने यस पटक पुराना विरामीमा फर्केको कोरोना कुनै लक्षणहरू देखिने गरेको छैन । यसको मतलब यदि कोही कोरोनाबाट संक्रमित छ भने उसलाई आफैंले थाहा पाउँदैन र उ सतर्क रहन सक्दैन ।
काेराेनाबाट थप १ जनाकाे मृत्यु, मृतककाे संख्या ३० पुग्याे